Books – CEO Business & Management Magazine
So Good They Can’t Ignore You’
ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပြင်းပြနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါ။ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ခုခုကို လိုတယ်ဆိုတာ တင်ပြထားပါတယ်။
The Ruler’s Guide ဒေါက်တာသာထွန်းဦး ယခုလတွင် မိတ်ဆက်ပေးလိုသည့်စာအုပ်မှာ Ching Hua Tang ၏ The Ruler’s Guide စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အများစုအနေဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများနှင့် နည်းဗျူဟာများလေ့လာလျင် တရုတ်ပညာရှင်ကွန်ဖြူးရှပ်နှင့် ဆွန်ဇူးတို့ထံမှသာဖြစ်ပြီး တရုတ်အင်ပါယာတစ်ဦးဖြစ်သူ Tang Taizong ထဲမှ မကြားဖူးသလောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးတရုတ်နိုင်ငံ၏ အရှည်ကြာဆုံးနန်းဆက်ဖြစ်သည့် Tang မင်းဆက်၏ ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူအင်ပါယာ Taizong သည် သမိုင်းတွင်ကြီးကျယ်လှသည့် သြဂတ်စတပ်စ်၊ ဂျင်ဂျစ်ခန်နှင့် နပိုလီယံတို့နှင့် တစ်တန်းတည်းထားခံရသူဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်မှုတွင် တစ်ချို့ကိစ္စများတွင် ပိုမိုသာလွန်သည်ဟုပင် ဆိုနိုင်ပါသည်။ သူ၏လက်ထက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနှင့် အင်အားအရှိဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ Taizong ၏ပြောင်မြောက်သော လုပ်ဆောင်မှု့တစ်ချို့မှာ – နန်းမတက်ခင် အသက် ၂၈နှစ် အရွယ်ကတည်းကပင် မင်းအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်း။ – […]
ဘီလ်ဂိတ်က မကြာသေးခင်ကပဲ သူနှစ်စဉ်ဖတ်ရှုတဲ့စာအုပ်တွေထဲက စာအုပ်ငါးအုပ်ကို ယခုလိုကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အိမ်တွင်းနေချိန် စိတ်အပန်းပြေရုံပြီးအကျိုးရှိစေဖို့ စာဖတ်သူတွေကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ “ခုတလောအစည်းအဝေးတွေမှာ ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက Covid-19 နဲ့ပတ်သက်တာတွေဖြစ်ပြီး ဒီ Covid ကာလမှာဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပဲ” လို့ ဘီလ်ဂိတ်ကသူ့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာရေးထားပါတယ်။ ဘီလ်ဂိတ်နဲ့ သူ့ရဲ့မိန်းမမဲလင်ဒါတို့ဟာ သူတို့ဖောင်ဒေးရှင်းကနေတစ်ဆင့် Coronavirus ကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းသုံးရာအထိ လှူဒါန်းထားပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်တော့်ကို ဘာစာအုပ်တွေဖတ်လို့ ဘာတွေကိုစောင့် ကြည့်နေသလဲ” ဆိုတာကို မကြာခဏအမေးခံရပါတယ်။ဘီလျံနာစာကြမ်းပိုးဖြစ်သူ ဘီလ်ဂိတ်ဟာအပတ်တိုင်းမှာ အနည်းဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ရှုလေ့ရှိသူပါ။ သူရွေးချယ်ပေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ်ပါရှိပါတယ်။ တစ်အုပ်က Holo-caust Survivor တစ်ဖြစ်လဲ Psychologist ဖြစ်သူစာရေးဆရာမကြီး Dr. Edith Eva Eger ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်အုပ်ကတော့ Disney CEO Bob Iger ရဲ့ Disney […]
ယခုလတွင် မိတ်ဆက်ပေးလိုသည့်စာအုပ်မှာ Robert Kuok ပူးတွဲရေးသားထုတ်ဝေသည့် Robert Kuok ဘ၀မှတ်တမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်လေးစားအထင်ကြီးဂုဏ်ယူရသည့် အာရှတိုက်သားဘီလျံနာတစ်ဦးဖြစ်သူ Robert Kuok ၏ ဘဝသမိုင်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စာအုပ်များထွက်ဖူးသော်လည်း ဤ Robert Kuok: A Memoir သည်သာ သူကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသည့် ဘဝမှတ်တမ်းဖြစ်ရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အခြားဖတ်ရှုလေ့လာသင်ယူလိုသူတစ်ဦးမှာ ဟောင်ကောင်မှလီကားရှင်း (Li Ka-shing)ပင် ဖြစ်ပါသည်။ Robert Kuok: A Memoir စာအုပ်မှာ 140 x 210 x 34.8 mm အရွယ်အစားရှိပြီး စာမျက်နှာ ၃၈၀ ခန့်ရှိသော်လည်း လက်ကမချချင်လောက်အောင်ပင် ဆွဲဆောင်မှုကောင်းလှပေသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး စင်ကာပူ၊ ထိုင်း စသည့်နိုင်ငံများရှိ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် အလုအယက်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး […]
ယခုလတွင် မိတ်ဆက်ပေးလိုသည့်စာအုပ်မှာ Kishore Mahbubani ၏ Can Asians Think? စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အာရှသားတစ်ဦးဖြစ်သူ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် စာအုပ် ခေါင်းစဉ် မြင်မြင်ချင်းဝယ်ယူဖတ်ရှုခဲ့ပါသည်။ နှစ်ခါသုံးခါမက ဖတ်ရှုခဲ့သော စာအုပ်များထဲတွင် တစ်အုပ်အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို ဝယ်ယူဖတ်ရှုရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်တစ်ရပ်က စာအုပ်အဖုံးတွင် နိုင်ငံရေးဂုရုကြီးဖြစ်သူ Henry Kissinger ၏ မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီးသူက “”စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော၊ လှုံ့ဆော်မှုပေးသော အတွေးအခေါ်နှင့် ပြည့်စုံသော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စာအုပ်”ဟုဆိုထားပါသည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက တရုတ်တို့၏ ရှည်ကြာလှသောသမိုင်းနှင့် စက္ကူ၊ ယမ်း စသည့် တီထွင်မှုဖြစ်စဉ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော သမိုင်းကြောင်းများကို လေ့လာခဲ့ရသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် အစစအရာရာ၊ တေးဂီတ၊ အတွေးအခေါ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နည်းပညာအားလုံးနီးပါး အနောက်နိုင်ငံများမှသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရသောအခါ အာရှသားများအနေဖြင့် အနောက်နိုင်ငံသားများကဲ့သို့ […]
ဒေါက်တာ သာထွန်းဦး ယခုလတွင် မိတ်ဆက်ပေးလိုသည့်စာအုပ်မှာ Clayton M.Christensen ရေးသားသည့် How Will You Measure Your Life? စာအုပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ယောက်အဖို့ အလုပ်နှင့်မိသားစုမျညီရေး၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိ သောဘ၀တည်ဆောက်နိုင်ရေးစသဖြင့် တိုတောင်းသော ရှင်သန်ရပ်တည်ရသည့် ဘဝတစ်သက်တာအတွက် စနစ်တကျပြင်ဆင်ကြသကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးစုံလည်း ဖွင့်ဆိုကြပါသည်။ စာရေးသူအနေဖြင့် Harvard Business School တွင် သင်ကြားနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရာ သင်တန်းတစ်ခုပြီးတိုင်း မှာကြားလေ့ရှိသည်မှာ ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ကြုံရသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပြန်လည်တွေ့ဆုံသည့် အခမ်းအနားတွင် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလှကြောင်း၊ သို့သော် စာရေးသူတို့၏ကျောင်းနေဖက်များ ဆယ်ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံသည့် အခမ်းအနားတွင်မူ အစစအရာရာ ပြောင်းလဲလာကြောင်း၊ တချို့ကို မတွေ့ရတော့ပါကြောင်း၊ အောင်မြင်သူတချို့ကို ထပ်မံတွေ့ဆုံရပါကြောင်း၊ သို့သော် သတိပြုမိသည့်အချက်မှာ ပျော်ရွှင်မှုဆိတ်သုဉ်းနေခြင်း ပင် ဖြစ်ကြောင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းဆင်းခါစတွင် မျော်လင့်ချက်၊ […]
ဒီ ၃ အုပ်ထဲမှာ ကိုယ်သိပြီးသား၊ ဖတ်ထားပြီးသား စာအုပ်တွေပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုမှစီမံခန့်ခွဲမှုလောကထဲဝင်လာမယ့်၊ ဝင်လာတဲ့ မျိုးဆက်သစ်မန်နေဂျာနဲ့ Executive တွေအနေနဲ့သိထားသင့်တယ်လို့မှတ်ယူပြီး ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done (Harperbusiness Essentials) By Peter F. Drucker Peter F. Drucker ပြောတဲ့ Executive ကောင်းတစ်ဦးဆိုတာကတော့ မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကို ပြီးပြတ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေ သတိမထားမိလိုက်တာတွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ အကျိုးမဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင် ရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းကို မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသိဉာဏ်၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ ဗဟုသုတတွေကိုပေါင်းစည်းပြီး လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရင်တော့ Executive တစ်ဦးရဲ့ အလုပ်ဟာ အလုပ်တွင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ […]
Economist မဂ္ဂဇင်းကညွှန်းဆိုတဲ့၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးကဏ္ဍက စာအုပ် ၅ အုပ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Capitalism, Alone : The Future of the System That Rules the World Branko Milanovic Income distribution & Inequality နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူစာရေးသူကအရင်းရှင်ဝါဒဟာ စီးပွားရေးစနစ်တွေအတွက် အဆုံးသတ်ဖြစ်နိုင်ပြီး လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှင်သန်ဖို့အတွက် ဒါကကျဆုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ အရင်းရှင်စနစ်ရှင်သန်တဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းတွေမှာ အကျိုးအမြတ်ရဖို့အတွက်နဲ့ ရေရှည်ပွင့်လင်းပြီး လွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်ချက်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ စံနှုန်းတွေကို တိုက်စားသွားပါလိမ့်မယ်။ အခုဆိုရင် ဒီလိုလူမှုအသိုက်အဝန်းတွေကို ပိုပြီးအာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အရင်းရှင်လူမှု အသိုက်အဝန်းတွေ အထူးသဖြင့် တရုတ်လိုဖြစ်သွားစေဖို့ ပိုမိုအားပေးမှုတွေ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကို စာရေးသူကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို […]
သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲစေမယ့်စာအုပ် ၈ အုပ်
သင့်လုပ်ငန်းမှာ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ စွန့်စားခန်းအတွက် ဘဝရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို ထွေးပွေ့လက်ခံဖို့ စတင်ပြီး နေ့စဉ်သင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ကူညီလမ်းပြပံ့ပိုးပေးမယ့် စာအုပ်ရှစ်အုပ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ဒီစာအုပ်တွေကသင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲသွားစေပါလိမ့်မယ်။ ၁. Emotional Agility by Susan David ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဟားဗတ်ဆေးတက္ကသိုလ်မှ စိတ်ပညာရှင် Susan က စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို ကြောက်ခြင်း၊ ချုပ်တည်းနှိပ်ကွပ်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ချက်ချင်းလက်တွေ့လုပ်ခြင်းပြုမယ့်အစား ခံစားချက်တွေကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်ဖို့သင်ကြားပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်ဖိုးတွေအကြောင်း အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကို သင်တူးဆွနိုင်ရင် ပြည့်ဝတဲ့ဘဝကို သင်ဖန်ဆင်းဖို့ အကူအညီရပါလိမ့်မယ်။ စာဖတ်သူတွေဟာ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောသလိုမျိုး သူတို့ဘာ သာ စကားပြောရမယ်လို့လည်း Susan က သင်ပေးပါတယ်။ သင်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာပဲဖြစ်နေနေ ”ငါ့ခံစားချက်အတွက် တခြားရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကဘာတွေလဲ” […]
(1) Future First by Alice Mann စာေရးဆရာမ Alice Mann က ကြ်န္မတုိ႔ကုိ လူေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ေရရွည္အက်ဳိးဆက္ေတြကုိ စဥ္းစားခ်င္႔ခ်ိန္ဖုိ႔ စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာရယ္၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈရယ္၊ အသနားခံမႈရယ္ တစ္ပုိင္းစီေရာစပ္ၿပီး ဒီစာအုပ္မွာ ေရးထားပါတယ္။ တာရွည္ခံၿပီး ေရာယွက္ေပါင္းစည္းတဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရလာဒ္ေတြနဲ႔ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ရယူဖုိ႔ စိတ္ဝင္စားတဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္တုိင္း လက္မလြတ္တမ္း ဖတ္သင္႔တဲ႔ စာအုပ္ပါပဲ။ Kirsten Saenz Tobey : Co-Founder, Retail Foods (2) Complexity of Cooperation by Robert Axelrod ဒီစာအုပ္က ေဖာက္သည္ေတြ စီးပြားဖက္ေတြ၊ ၿပိဳင္ဘက္ေတြနဲ႔ ‘သူလည္းႏုိင္ ကုိယ္လည္းႏုိင္’ အေျခအေနရဖုိ႔နဲ႔ အံဝင္ခြင္က်ေအာင္ခ်ိန္ညွိရာမွာ ဂိမ္းသီအုိရီက တကယ္ပဲ ျခားနားမႈလုပ္ေပးႏုိင္တယ္ဆုိတာ […]
Posted On February 15, 2019, By Editorial
ေအာင္ျမင္ေသာအရာရွိမ်ားအတြက္ အထူးရည္ညြန္းသည္႔ စာအုပ္ ၂၁ အုပ္ (အပုိင္း – ၂)
(1) The Power of Habit by Charles Duhigg ဘာပဲေျပာေျပာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕အက်င့္ ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကံၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္။ ဘင္ဂ်မင္ဖရန္ကလင္က ညတိုင္းအိပ္ရာဝင္ခါနီး ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးတယ္။ အာရီယားနားဟပ္ဖင္တန္က အလုပ္မသြားခင္နာရီဝက္ ကမၼ႒ာန္းထိုင္တယ္။ ဒီစာအုပ္က ကြ်န္ေတာ္ရတဲ့ သင္ခန္းစာက ဘဝအေပၚကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈဟာ တိက်ေစ့စပ္တဲ့အက်င့္မဟုတ္ဘူး။ အက်င့္အသစ္ေတြ ကိုေမြးဖို႔စြမ္းအင္ျဖစ္တယ္။ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့အက်င့္ေတြ ကို ဖန္တီးေရးသားျဖစ္တယ္ဆိုတာပဲ။ အဲဒီအက်င့္အေျခခံ သေဘာထားကိုရယူနည္း စာေရးဆရာက ျပသထားတယ္။ David Maxfield (အေရာင္းရဆံုး စာေရးဆရာ) Vice President, VitalSmarts Co. (2) Emotional Intelligence 2.0 by Travis Bradberry ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သူတို႔ခံစားခ်က္အရသ႐ုပ္မေဖာ္ဘဲ သူတို႔ေရွ႕မွာ သူတို႔ခံစားခ်က္ကို ေျဖရွင္းပံုနဲ႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ရပါတယ္။ […]
Posted On January 16, 2019, By Editorial